Ambohimanambola-Anjeva Mpamaky trano sady mpanolana 5 no voasambotra
Mijaly noho ny asan-jioalahy ireo mponina ao Ambohimanambola sy Anjevagara tao anatin’ny iray volana izay.
Nahitana vaky trano niaro fanolanana mantsy tao Volomborona kaominina Anjevagara ny alin’ny 01 mey 2020 lasa teo. Jiolahy miisa 05 no nanatanteraka izany asa ratsy izany. Nihetsika ny mpitandro ny filaminana noho ny vaovao azo tamin’ny olona tsara sitra-po ka fantatra fa izy dimy lahy ireto avokoa no namaky ireo trano lasibatra sy nanolana ireo vehivavy roa. Tsena sy moto no may tamin’izany ary vola 14 tapitrisa Ar no lasan’izy ireo tao Volomborona. Vola 06 tapitrisa Ar sy vehivavy roa kosa voaolana ary olona iray no voapaka famaky sy naratra mafy vokatry ny fandalovan’ny bala tamin’ny vatany tao Ambohidrazana. Mbola misy namain’izy ireo tafatsoaka moa hoy ny vaovao ary manana basy.